Umgubo wamanzi weSoluble
Ithebhulethi kunye neBolus
Amayeza amaTshayina esiNtu
I-Gentamycin Sulfate In sindion
Ithebhulethi yeAlbendazole 2500mg
Uqulunqo: IAlbendazole ……………. 2500 mg Ababekekileyo qs ……… .. 1 bolus. Iimpawu: Uthintelo kunye nonyango lwe-gastrointestinal kunye ne-pulmonary solidyloses, cestodoses, fascioliasis kunye ne-dicrocoelioses. I-albendazole 2500 yi-ovicidal kunye ne-larvicidal. iyasebenza ngokukodwa kwi-larvae enobunzima bokuphefumla kunye nokugaya umzimba. Contraindication: I-hypersensitive ukuya kwi-albendazole okanye nawaphi na amalungu ealben2500. Umthamo kunye noLawulo: Ora ...
Ithebhulethi yeAlbendazole 600mg
Uqulunqo: IAlbendazole ……………………………………………………………………………………………………… i-600 mg yababodwa kwi-qs ……… .. 1 bolus Iimpawu: Uthintelo kunye nonyango lwe-gastrointestinal kunye ne-pulmonary solidyloses, cestodoses, fascioliasis kunye ne-dicrocoelioses. I-albendazole 600 yi-ovicidal kunye ne-larvicidal. iyasebenza ngokukodwa kwi-larvae enobunzima bokuphefumla kunye nokugaya umzimba. Contraindication: I-Hypersensitive kwi-albendazole okanye nawaphi na amacandelo e-alben600 Dosage and Administration: Ngomlomo: S ...
Ithebhulethi yeAlbendazole 300mg
Uqulunqo: IAlbendazole ……………………………………………………………………… i-300 mg yababodwa qs ………… 1 bolus. Iimpawu: Uthintelo kunye nonyango lwe-gastrointestinal kunye ne-pulmonary solidyloses, cestodoses, fascioliasis kunye ne-dicrocoelioses. I-albendazole 300 yi-ovicidal kunye ne-larvicidal. iyasebenza ngokukodwa kwi-larvae enobunzima bokuphefumla kunye nokugaya umzimba. Contraindication: I-Hypersensitive kwi-albendazole okanye nawaphi na amacandelo ealben300. Umthamo noLawulo: Ngomlomo: ...
Umanejala wokuthengisa kwisebe lamanye amazwe: URay Yang
Nge-20 kaJuni 20 kwiJizhong Iqela liye kwiVIV ...
Nge-20 kaJulayi ngo-2016